FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA LABRADOODLE AOSTRALIANINA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika Labradoodle aostralianina
'Nina the Australian Labradoodle amin'ny 8 volana. Tena maneho hevitra i Nina! Mivazavaza izy, tia mikopakopaka ary mihifikifi-doha foana. '
Fanamarihana: misy karazany telo ny Labradoodles amin'izao fotoana izao: ny Labradoodle aostralianina dia nitombo tany Aostralia, ny Labradoodle aostralianina nitombo tany Etazonia sy ny Labradoodle Amerikanina .
Ny Labradoodle aostralianina dia nitombo tany Aostralia ary nankatoavin'ny Fikambanan'i Labradoodle any Australia sy ny International Australian Labradoodle Association, Inc., dia nanjary tanjona hamorona alika madio. Tsy fantatra mazava hatreto hoe nanao ahoana ny fivoaran'ny aostralianina.
ny Labradoodle Amerikanina dia alika hybrid, nompiana tamin'ny fiampitana ny Poodle miaraka amin'ny Labrador retriever .
Ny mpiompy sasany dia miantso Labradoodles maro an'isa Labradoodles aostralianina (indraindray misy karazana hafa mifangaro ankoatr'izay laboratoara SY Poodle ). Labradoodles maro an'isa dia hybrida ary hafa noho ny ateraky ny klioba aostralianina.
Ireo alika aseho amin'ity fizarana fampahalalana ity dia ny Labradoodles aostralianina nompiana tany Aostralia, miaraka amin'ny tanjona hamoronana alika madio. Rehefa mifandray amin'ny mpiompy mivarotra Labradoodles aostralianina dia aza hadino ny manontany hoe inona no karazana Labradoodle ananany.
Tsindrio eto raha hijery ny Fenitra Labradoodle aostralianina ho an'ny alika alain'ny klioban'ny firenena Aostralia.
Ny Labradoodle aostralianina dia tsara amin'ny ankizy ary mora hampiofana . Mifanaraka tsara amin'ny alika hafa izany. Hendry tokoa izy io, hampahasosotra ary mahafaly, ary haingana hianatra asa tsy mahazatra na manokana. Mavitrika, mahatsikaiky kely indraindray, afaka manandrana mandringana ny tompony izy raha tan-dalàna . Tena zava-dehibe ny hamafisin'ity alika ity fa tony, mpitarika fonosana tsy miova ary manome azy fanazaran-tena ara-tsaina sy ara-batana isan'andro ny sorohy ny olan'ny fihetsika . Sariaka, na dia mazava ho azy aza fa tsy mivadika amin'ny fianakaviany, ity alika ity dia tsy mahery setra.
alika karazany araka ny abidia
Miniature: lanja 30 - 50 pounds (14 - 25 kg) lahy lehibe kokoa.
Aretina HD, PRA, VonWilabrands, kiho ary patella.
Tsy maninona ny Labradoodle aostralianina ao amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fanatanjahan-tena. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary hanao ny tsara indrindra amin'ny tokontany farafahakeliny farafaharatsiny.
Ity karazana ity dia mila fampihetseham-batana betsaka, izay ao anatin'izany mandeha lava isan'andro .
manao ahoana ny halehiben'ny rat terriers
Ankizy 4 ka hatramin'ny 10 eo ho eo, 8 eo ho eo
Ny palitao olioly dia mila fikolokoloana tsy tapaka miaraka amin'ny borosy somary mahia isaky ny tapa-bolana ary angamba roa ka hatramin'ny intelo isan-taona, fehezam-bidy, scissoring na fametahana lamba mba hitandrina. Ny ankamaroan'ny Labradoodles aostralianina dia milatsaka kely fotsiny ary mety tsy mahazaka volo.
Ity ohatra mahazatra amin'ny fampiroboroboana lojika sy nomanina ity dia noforonina tany amin'ny firenena Australie tamin'ny taona 1980. Ny tanjon'ireo klioba aostraliana dia ny hamorona 'karazany' vaovao miaraka amin'ny toetra tsara indrindra amin'ny karazany tany am-boalohany. Ny tanjon'i Wally Conron dia ny famokarana alika fanampiana izay tsy mandena volo (ho an'ireo olona voan'ny allergy). Ny alika mpitari-dalana Labradoodle aostralianina dia efa nofanina tsara ary napetraka tany Aostralia sy Hawaii, saingy mbola tsy lasa fanomezam-boninahitra raikitra ny toetra tsy mampitohy ny Standard Poodle. Ny Labradoodle aostralianina dia nanomboka niampita tsotra teo anelanelan'ny Labrador retriever SY Poodle mahazatra na Poodle kely ary mbola any Amerika Avaratra no misy an'io. Etsy andaniny, ireo Australiana dia nanao ny dingana lavidavitra kokoa ny Labradoodle. Tamin'ny tapaky ny taona 2004 dia nambara fa ny Labradoodle aostralianina dia tsy hazo fijaliana Labrador x Poodle fotsiny fa karazany namboarina tao anatin'ny zony manokana novolavolaina nandritra ny taona maro ary misy tanjona kendrena ao an-tsaina. Mba hahatratrarana ireo tanjona ireo, ny fampandrosoana bebe kokoa dia natao tamin'ny fampidiran-dresaka tamin'ny ray aman-dreny nampidirina tamin'ny tsipika lakrano Labrador x Poodle izay efa mamelana. Ny mpamorona ny karazany dia nitady ny fomba tsara indrindra hanindrahindrana ny trompetra Labradoodle aostralianina, ary hampivelatra ireo toetra hitany sy tiany amin'ireo alika ireo. Tamin'ny taona 1997, ny Australian Australian Labradoodle Breed Standard no nosoratana izay naneho taratra ireo tanjona ireo. Ny Labradoodle aostralianina dia misy karazany 6 isan-karazany eo am-piandohany. Ny karazana ray aman-dreny efa voamarina sy neken'ny Labradoodle aostralianina dia ny Poodle (Standard, Miniature, kilalao, Labrador retriever , Spaniel Rano Irlandey , Famerenana palitao olioly , Spaniel Cocker amerikana SY English Cocker Spaniel .
LAA = Fikambanan'ny Labradoodle any Aostralia
'Nina dia mpanelanelana amin'ny Labradoodle aostralianina kely. 8 volana izy izao. Tena marani-tsaina izy, be fitiavana, tsy dia mivily, ary tena maneho hevitra. '
Sary natolotry ny Tegan Park Labradoodle Breeding and Research Center
Labradoodles aostralianina, sary nahazoana alàlana avy amin'ny Tegan Park Labradoodle Breeding and Research Center, Yarragon, Australia
Sary natolotry ny Rutland Manor Labradoodles
Sary natolotry ny Tegan Park Labradoodle Breeding and Research Center, Yarragon, Aostralia
Zeb. Tonga hatrany amin'ny Rutland Manor any Aostralia ka hatrany Etazonia izy.
Zeb ny Labradoodle aostralianina
Sary natolotry ny Rutland Manor Labradoodles, mpiompy
alika alika sy alikaola
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Labradoodle aostralianina
Sary Aostralianina Labradoodle 1
Aostraliana alika sy ny biby fiompy corgi Mix
teboka mena eo amin'ny orona alika
asehoy ahy ny sarin'ny mpiandry ondry alemanina
boston terrier mifangaro chihuahua